No-ihicha Extrusion onyinye Fatịlaịza Production Line - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Anyị nwere ahụmahụ zuru ezu na ahịhịa na-enweghị eriri extrusion na-enweghị eriri. Ọ bụghị naanị na anyị na-elekwasị anya na usoro ọ bụla njikọ na usoro mmepụta, mana anyị na-aghọtakwa usoro nkọwa nke usoro mmepụta ọ bụla na ihe ịga nke ọma iji mekọrịta. The zuru ezu mmepụta usoro bụ otu n'ime ndị isi uru nke gị imekọ ihe ọnụ na YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd Anyị na-enye ahaziri mmepụta akara ngwọta dị ka mkpa n'ezie nke ndị ahịa.
No-ihicha Extrusion onyinye Fatịlaịza Production Line nwere ike ịmepụta fatịlaịza dị elu, nke dị ala na nke dị ala maka ihe ọkụkụ dị iche iche. Mmepụta akara adịghị mkpa nkụ, na obere ego na obere oriri ike.
N'ikwu okwu n'ozuzu, onyinye fatịlaịza nwere ma ọ dịkarịa ala abụọ ma ọ bụ atọ nri (nitrogen, site, potassium). O nwere njirimara nke ọdịnaya nke ezigbo edozi na mmetụta ole na ole. Fatịlaịza fatịlaịza na-arụ ọrụ dị mkpa na njikọta spam. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị melite Fertilization arụmọrụ, kamakwa kwalite anụ na akwa mkpụrụ nke kụrụ.
Anyị na-enye usoro zuru oke nke ahịhịa na-emepụta ahịhịa na-enweghị ihe na-adịghị mkpa. Mmepụta akara ngwá tumadi na-agụnye igwekota na disk feeder, ala extrusion granulation igwe, ala sieve igwe, belt ebu, akpaka nkwakọ igwe na ndị ọzọ inyeaka akụrụngwa.
The dryless extrusion granulator gụnyere akpaka Efrata, belt conveyors, biaxial igwekota, diski feeders, extrusion granulation igwe, ala sieves, okokụre n'ụlọ nkwakọba ihe, akpaka nkwakọ igwe, wdg
3. Ala extrusion granulator
5. Ihe Ntanetị Electronic